ကျွန်တော် မရူးချင်ပါ! (ကမ္ဘာ့ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်) - News @ M-Media
ကျွန်တော် မရူးချင်ပါ! (ကမ္ဘာ့ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်)
in Our Perspectives / ဝတ္ထုတို — September 28, 2012
စက်တင်ဘာ၊ ၂၈ ၊၂၀၁၂
လမ်းမီးအလင်းရောင်မရှိသော လမ်းကလေးတွင် လရောင်၏ အားကိုးနှင့် ကောင်လေးတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာနေသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် အမြန်လျှောက်လိုက်၊ တစုံတခုကို တွေးမိဟန်နှင့် ခြေလှမ်းတွေ နှေးသွားလိုက်နှင့်။
ကောင်လေးက လမ်းလျှောက်နေရင်း ရုတ်တရက် ရပ်၍ လက်သီးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ်လိုက်ပြီး အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာကာ တက်ခေါက်လိုက်ဟန်က သည်ကလေးအရွယ်လေးနှင့် ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ်ချေ။
သူရပ်လိုက်သည့်နေရာက လမ်းထိပ်အုတ်ခုံလေးရှိရာ ဖြစ်နေသည်။ လက်သီးဆုပ်တွေကို ဖြေလိုက်ပြီး ဟင်းခနဲ သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချလိုက်သည့်အခါ စောစောက မာန်နှင့်တင်းထားပုံ ချက်ချင်းပျောက်ပြီး သူ့ကိုယ်လေးပင် ကျုံ့ဝင်သွားသယောင် ထင်ရသည်။ အုတ်ခုံလေးပေါ် ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူ မရှိုက်ဘဲ မျက်ရည်တွေ ကျလာပါ၏။
ကျွန်တော်အသက် ၁၀ နှစ် အရွယ်မှစ၍ အပြင်အလုပ်စလုပ်ရသည်မှာ အခုဆို နှစ်နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်တော် ကျောင်းမဆက်တက်တော့ပေမယ့် ညီမလေးကိုတော့ ပညာတတ်ဖြစ်စေချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော် ကြိုးစား၍ ငွေရှာသည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်၊ အဖေဆုံးသည့်နှစ်တွင် ညီမလေး ကျောင်းစတက်ရသည်။ ကျောင်းသားနှစ်ယောက်၏ စရိတ်နှင့် အိမ်စရိတ်သည် မေမေ့လုပ်အား တစ်ခုတည်းနှင့် မမျှသောအခါ ကျွန်တော်ကျောင်းထွက်ပြီး အဖေလုပ်ခဲ့သော အိမ်ဆေးသုတ်သည့် အဖွဲ့တွင် ဝင်လုပ်သည်။ ဆေးအနံ့ရလျှင် ကျွန်တော် နှာချေတတ်သည်မှလွဲ၍ ထိုအလုပ်လုပ်ရသည်မှာ အဆင်ပြေပါသည်။
မေမေထည့်ပေးသော ထမင်းဗူးကို လွယ်အိတ်ထဲထည့်ကာ ကျွန်တော် အိမ်က ထွက်လာသည်။ မနေ့ညက အလုပ်မှအပြန် မိုးမိထား၍ ဒီနေ့ နှာရည်ယိုနေသည်။ လက်ရှိ ဆေးသုတ်ပေးနေရသော အိမ်မှာ တစ်မှတ်တိုင်ခန့်သာ ဝေး၍ လမ်းလျှောက်သွားလိုက်သည်။
ဒီနေ့မှ ကျွှန်တော်တို့အဖွဲ့မှ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်က အလုပ်မလာပေ။ သူ့သားလေးခွေးကိုက်ခံရလို့ ဆေးရုံတင်ထားရသည်တဲ့။ “ခွေးကိုက်ခံရရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးရတယ်ကွ၊ ထွန်းမြင့်က သူ့သားလေး ခွေးကိုက်ခံရလို့ ဆေးခန်းတော့ သွားပြတယ်၊ ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးက လေး၊ ငါးလုံး ထိုးရမယ်၊ တစ်လုံးကို တစ်သောင်းကျော်တယ်ဆိုတော့ မလွယ်ဘူးပေါ့ကွာ” ဟု နောက်ဦးလေးတစ်ယောက်က ပြောသည်။ ကျွန်တော် တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွား၏။ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်မှာလည်း ခွေးလေခွေးလွင့်တွေ ပေါသည်။
တစ်နေကုန် အလုပ်လုပ်လိုက်တော့ ဆေးအနံ့တွေကြောင့် ကျွန်တော့်နှာခေါင်းက ပိုဆိုးလာပြီး ခေါင်းလည်းကိုက်၊ မျက်စိများပါ ဝေလာ၏။ အလုပ်သိမ်းတော့ လူက ဖျားချင်နေပြီ။
ဦးလေးကြီးတို့ကို မစောင့်ဘဲ ကျွန်တော် တိုက်အောက်သို့ ဆင်းလာလိုက်၏။ လှေကား အောက်ဆုံးအထစ်သို့ အရောက်၊ တိုက်ရှေ့တွင် ရန်ဖြစ်နေကြသော ခွေးအုပ်ထဲမှ ခွေးတစ်ကောင်က ဂိန်ခနဲ အော်ပြီး လှေကားထဲ ပြေးဝင်လာ၏။ ကျွန်တော် ရှောင်ချိန်မရလိုက်။ ခြေသလုံးက ပူပြီး၊ ရင်ဘတ်ထဲတွင် ကျဉ်သွား၏။ ” ဟာ၊ ကောင်လေးကို ခွေးကိုက်သွားပြီဟေ့ “ ဟု အော်ကာ ဦးလေးကြီးတို့ ပြေးဆင်းလာကြသည်။
ဆေးခန်းရောက်တော့ ဆရာဝန်က အနာကို ဆေးပေးပြီး မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးသည်။ တစ်ဆက်တည်း ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ရှင်းပြ၏။ လိုအပ်သော ငွေပမာဏကို ကျွန်တော် ဘယ်ကရမည်နည်း၊ တွေးရင်း ကျွန်တော် ခြောက်ခြားလာပါသည်။
အိမ်ရောက်တော့ ထမင်းမစားဘဲ အိပ်လိုက်သည်။
ကျွန်တော့် အိပ်မက်ထဲတွင် ကျွန်တော် ဆောက်တည်ရာမရ ပြေးနေသည်၊ ညီမလေးက ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး ‘ ကြောက်တယ်၊ ကြောက်တယ်၊ မလာနှင့်၊ မလာပါနှင့် ‘ ဟု အော်ကာ ပြေး၏၊ ညီမလေးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် သနားသွားသည်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ထိန်းချုပ်၍ မရ၊ ကျွန်တော် အိမ်အောက်ကို ဆင်းပြေးတော့ အိမ်ရှေ့တွင် ကစားနေသော ကလေးတွေက ‘ ခွေးရူးကြီး၊ ခွေးရူးကြီး ‘ ဟု အော်ကာ ကြောက်လန့်တကြား ပြေးကုန်၏၊ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က သွားရည်များလည်း ကျနေ၏၊ ကလေးတွေ နောက်ကို ပြေးလိုက်ရင်း ကျွန်တော့် ခြေတွေ၊ လက်တွေ ကွေးကောက်ကုန်လေသည်၊ မြေပေါ်လဲကျကာ ပါးစပ်မှ အမြှုပ်တစီစီ ထွက်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော ကျွန်တော့်ကို အိပ်မက်ထဲတွင် ကျွန်တော် ခြောက်ခြားစွာ မြင်နေခဲ့ရလေသည်။
သန်းခေါင်ယံတွင် ချွေးစေးတွေ ပြန်ကာ ကျွန်တော် လန့်နိုးလာ၏။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ကျွန်တော်ချစ်သော မေမေနှင့် ညီမလေးကိုတော့ ကျွန်တော့်ကြောင့် ဒုက္ခမရောက်စေနိုင်ပါ။ ကျွန်တော့်ကြောင့် မေမေတို့ ထိခိုက်မည့်အစား ကျွန်တော် မရှိတော့သည်ကမှ ကောင်းပါဦးမည်။ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ပြီး ညီမလေးကာ ဖက်ပြီး အိပ်နေသော မေမေ့ကို သွားကြည့်သည်။ ဒါ ကျွန်တော် မေမေတို့ကို နောက်ဆုံးမြင်ခွင့်ရခြင်းလား။
ငိုချင်စိတ်ကို ချိုးနှိမ်ပြီး ကျွန်တော် အိမ်က တိတ်တိတ်လေး ထွက်လာလိုက်သည်။
ခပ်သုတ်သုတ်လျှောက်လာရင်း အိမ်နှင့် ဝေးလာတော့မှ ကျွန်တော်တွေးမိသည်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်? မည်ကဲ့သို့ အဆုံးသတ်ရမည်နည်း? ကြားဖူးနားဝ နည်းလမ်းတွေ စဉ်းစားကြည့်သော်လည်း တစ်ခုမှ မလုပ်ဝံ့။
” အဲဒီခွေးကိုက်လို့ သေချာပေါက် ခွေးရူးဖြစ်မယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ အကယ်၍ ရောဂါရှိနေတဲ့ ခွေးဖြစ်နေရင် ရောဂါကူးစက်ခံရရင် ဖြေဆေးမရှိလို့သာ ကာကွယ်ဆေးကို မဖြစ်မနေ ထိုးသင့်တာ” ဟု ဆရာဝန်ပြောခဲ့စကားကို ရုတ်တရက် သတိရလာတော့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ချက်ပြန်ရှိလာသည်။ ကျွန်တော့်ကို ကိုက်သောခွေးသည် ရောဂါမရှိသောခွေး ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်လား။ အိမ်ပဲ ပြန်တော့မည်။ လရောင်အေးအေးအောက်တွင် ကျွန်တော် ခပ်မြန်မြန် လျှောက်လာလိုက်၏။ မတော်တဆ မေမေနိုးလာလို့ ကျွန်တော့်ကို မတွေ့လျှင် စိတ်ပူနေတော့မည်။
ဦးလေး ဦးထွန်းမြင့်၏သား ဆေးရုံတက်ရတာကို တွေးမိတော့ ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရန် အားပျော့သွားပြန်သည်။ ခြေလှမ်းတွေ လေးကုန်၏။ ကျွန်တော်မရှိတော့လျှင် ကျွန်တော့်ကို ရှာနေမည့် မေမေ့ကို မြင်မိတော့ ကျွန်တော့် ခြေလှမ်းတွေ ပြန်သွက်လာပြန်၏။
မကြာပါ၊ ကျွန်တော့်အိပ်မက်ထဲက မြေပြင်ပေါ်လဲကျနေသောပုံစံက ဗြုန်းဆို ကျွန်တော့်အာရုံမှာပေါ်လာတော့ ကျွန်တော် ဆက်မလျှောက်နိုင်ဘဲ ရပ်လိုက်ရသည်။ အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး လက်သီးကို အားကုန်ကျစ်ထားမိသည်။ ” တောက် !”
ဖေဖေ့ကို သတိရတော့ ကျွန်တော် သိပ်ကို အားငယ်သွားပါသည်။ သက်ပြင်းရှည်တစ်ခု ချလိုက်သောအခါ တင်းထားသမျှတွေ ပြိုကျသွားသလို အားကုန်သွား၏။ ဘေးက အုတ်ခုံလေးပေါ် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျွန်တော် မျက်ရည်တွေ ကျလာသည်။
မှုန်ပျပျသာ လင်းနေသော လမ်းကလေးထက်ရှိ အုတ်ခုံပေါ်တွင် ကောင်လေး ထိုင်နေသည်။ ကောင်လေးက ကျလာသည့် မျက်ရည်တွေကိုလည်း သုတ်မပစ်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကောင်လေး၏ ရှိုက်ငိုသံက ပျံ့လာသည်။
လမင်းကို တိမ်ဖုံးသည့်ခဏ လမ်းကလေးက မှောင်မိုက်သွားသည်။ ကောင်လေး၏ ငိုသံသဲ့သဲ့ကတော့ ပျောက်မသွား။ ကောင်လေးက ထိုင်နေဆဲ၊ ရှိုက်၍ ရှိုက်၍ ငိုနေဆဲ……။
Tags: Rabies, ပညာပေး, ဝတ္ထုတို